Archive du 20190405
In’efatra tany andafy ny filoha Volabe no lany
Telo volana latsaka kely nitondrana ny firenena ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina sy ny ekipany.
Kandidam-panjakana mandika lalàna Jamba tanteraka ny HCC sy ny CENI
Miharihary tanteraka ny endrika fiandanian’ny fanjakana foibe sy ny filoha amin’ny kandida depiote hatolotry ny vovonana tohanan’ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina dia ny IRD,
Fadiranovana I Betioky Atsimo 20 000Ar ny ondry iray fa tsy voavidy
Fitsipi-pitondran-tena mivahavaha Olona fototra eto Madagasikara
Anisan’ny fototry ny olana eto Madagasikara ny tsy fanarahan`ny Malagasy ny fitsipi-pitondran-tena.
Fanendrena ireo ambasadaoro Maninona no mitarazoka ?
Maninona no mihitsoka be tahaka izao ny fanendrena ireo masoivoho ambiny, ankoatr’ireo efa natao ?
Fitokonana etsy sy eroa Mila mpamaha olana mahira-tsaina
Mikatso tanteraka indray ny fampianarana ambaratonga ambony eny amin’ny oniversiten’Antananarivo noho ny fanamafisan’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka (SECES) sampana Antananarivo ny fitakiana.
Taorian’ny volamena sy ny Boaderozy Lasan’ny vazaha ihany koa ny gidro Malagasy
Gaga sy talanjona ny rehetra nahita ny fipariahan’ny sary maneho ireo gidro Malagasy Maki any ampitan-dranomasina, izay tsy fantatra mazava ny nahatongavany.
Karatra maha mpanao gazety Efa ampiasain’ireo mpanao kidnapping ihany koa
Nisy ny asa fakana an-keriny teto Antananarivo tamin’ny herinandro lasa izay nahatrarana ireo olon-dratsy.
Ady atao amin’ny famotsiam-bola Tsy an’ny SAMIFIN irery
Nifarana omaly alakamisy 4 aprily ny atrikasa natao nandritra 2 andro tetsy amin’ny Hotely Colbert Antaninarenina nanaovana ny tomban’ezaka nasionaly mahakasika ny famotsiam-bola sy ny famatsiam-bola amin’ny asa fampihorohoroana.
Filankevitry ny tanànan’Antananarivo Fanapahan-kevitra maro no horaisina anio
Ao anatin’ny fivoriana tsy ara-potoanan’ny Filankevitry ny tanànan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) nanomboka ny alarobia teo, etsy amin’ny lapan’ny tanàna Analakely.
Tsy voafehy intsony ny foloalindahy Lasa jiolahy ny zandary sy miaramila
Zandary ampy traikefa no mpamatsy basy ary miaramila zazavao amin’ny fanafihana vola mitentina 200.000.000 ariary sy basy ary finday avo lenta no tra-tehaka niaraka tamin’ny dadarabe
Analakely Hamboarina ireo fantsona lehibe
Ho avy afaka fotoana fohy ny fanamboarana ireo fantsona goavana mirefy 1,50 metatra ao ambanin’ny arabe Andrianampoinimerina.
Mpiasan’Ambatovy Manarina ny faritra avy notrandrahina
Miroso hatrany, araka izay voarakitra ao anatin’ny bokin’andraikitra mifehy an’Ambatovy, ny fanarenana mitandro ny tontolo iainana ny toeram-pitrandrahany ao Moramanga.
Fanokafana ny taom-pilalaovana ASIEF 2019 Ny « Grande Marche » no hanombohana azy
Hosokafana ofisialy amin’ny sabotsy 06 aprily ho avy izao ny taom-pilalaovan’ny ASIEF « Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires ».
Fikambanana JSE Nankasitraka ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana
Nanolotra amboara lehibe ho an’ny ben’ny tanànan’Antananarivo-Renivohitra (CUA), Lalao Ravalomanana, vokatry ny fanampian’ity farany ny lalao ara-panatanjahantena Foot à 11 nokarakarainy ny fikambanana JSE « Jeunes Sports Events »tamin’ny 25 -31 martsa lasa teo, izay notanterahana tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina.
Ambositra Nahafaty olona iray indray ny pesta
Mivarahontsana indray ny mpanara-baovao amin’ny fiverenan’ny areti-mandoza pesta amin-kery.
Victorio Randriamihanta Ny fanajana ny kolontsaina ihany no mampandroso ny firenena iray
Amin’ny ankapobeny, tsy misy fanajana intsony ny kolontsaina maha malagasy antsika, hoy Randriamihanta Victorio, filohan’ny fikambanana Malagasy Iray Hasina fa saika miaina amin’izay saim-pantany avokoa sisa ny rehetra.
Raharaha Omda sy Omaci Mamofona ambadika politika…
Manoloana ny zava-mitranga eo amin’ny tontolon’ny zon’ny mpamorona nahatonga mpanakanto maromaro nanao fanambarana tetsy amin’ny Kianjan’ny Kanto etsy Mahamasina
Fidorohana zava-mahadomelina Maro ny Malagasy ho lasa adala
Mitombo hatrany ny salanisan’ireo tanora mirona amin’ny fidorohana zava-mahadomelina ankehitriny ka ahiana ny hitomboan’ny isan’ireo ho lasa adala.
SOS Village d’enfants Feno 30 taona nanampiana ankizy kamboty
Fikambanana iray niorina taorian’ny ady lehibe faharoa ny SOS Village d’enfants, hanampy ireo ankizy kamboty noho ny hamaroan’ireo ray aman-dreny namoy ny ainy tamin’izany fotoana.
STAR TOUR andiany faharoa Any Antsirabe manomboka ny 20 aprily ho avy izao
Toy ny fanaony isan-taona dia hanatanteraka ilay Star tour ao Antsirabe, toerana malaza rehefa fetin’ny Paska ny orinasa Star.
Fanaovana kolikoly avo lenta Matahotra miteny ny mpanao gazety
Misy ny mpanao gazety mahafantatra ny fisian’ny kolikoly ary mahalala mihitsy ny olona manao izany saingy misafidy ny hangina noho ny tahotra,